CNC igwe machining
Ring, gburugburu, olu akwa Flange na gasket
Aro, njide, Spindle
Ndị ọzọ na-CNC lathe machining
CNC lathe machining Computer space Control ma ọ bụ CNC lathe igwe na-iji na-emepụta akụkụ site mbịne a mkpanaka nke ahọrọ ihe onwunwe na udia iche iche ọnwụ ngwaọrụ n'ime ihe na mgbanwe ogbu na akụkụ. Nke a ígwè na-enye ohere anyị na-emepụta dị nnọọ kpọmkwem akụkụ na di ntakiri ma ọ dịghị nke abụọ nhazi. Main Products Anyị metal lathe mbịne ngwá na ahụmahụ CNC lathe machining ka anyị nwee ike izute mkpa nke a sara mbara elu ugwu nke ndị ahịa ngwa. Routinely amị preci ...
Computer space Control ma ọ bụ CNC lathe igwe na-iji na-emepụta akụkụ site mbịne a mkpanaka nke ahọrọ ihe onwunwe na udia iche iche ọnwụ ngwaọrụ n'ime ihe na mgbanwe ogbu na akụkụ. Nke a ígwè na-enye ohere anyị na-emepụta dị nnọọ kpọmkwem akụkụ na di ntakiri ma ọ dịghị nke abụọ nhazi.
Anyị metal lathe mbịne ngwá na ahụmahụ CNC lathe machining ka anyị nwee ike izute mkpa nke a sara mbara elu ugwu nke ndị ahịa ngwa. Routinely amị nkenke metal akụkụ na diameters dị ka obere dị ka 0,012 "(0.31 mm) na ogologo dị ka obere dị ka 0,032" (0.81 mm), anyị na ngwá nwekwara ike ịnabata ogologo ruo 12 "(304.8 mm) na diameters ruo 12" (304.8 mm).
Anyị na-eji anyị multi-nzube lathe ngwá na CNC mmemme nka ịmepụta otu n'usoro nke elu shapes, si mfe mgbagwoju na gụnyere cylindrical na conical shapes. N'ihi na nkenke mwepụ nke metal, anyị ọkà machinists ahu nagide a dị ịrịba ama dị iche iche nke usoro na anyị na-agbanwe turret slant bed lathe na a 12-ọkwá turret iji nweta a dịgasị iche iche nke akụkụ atụmatụ. A na-agụnye (ma na-ejedebeghị na) mbịne, na-agwụ ike, mkpọpu ala, threading (ma esịtidem na mpụga), esịtidem tapping, grooving, ihu grooving, n'akụkụ gbanwere, àgwà, eche ihu, knurling, bee-apụ, chamfering, gasịrị anya, na radiusing.
CNC lathe machining nwere ike mere ndị a shapes ka photos gosiri, Ọzọkwa, anyị nkenke CNC lathe Machines e machining nkenke ibe akụkụ na-enye uru-kwukwara ọrụ maka aerospace, nkwurịta okwu, ọgwụ, ngwá electronic ndị ọzọ ọrụ dị ka gị.
Previous: Ndị ọzọ na-CNC lathe machining
Next: Ring, gburugburu, olu akwa Flange na gasket
Aluminum Housing OEM machining N'ihi Flow egosi
CNC machining Of A Steel Chain ndoli Drum N'ihi Power Utility
CNC machining Of An Aluminium Upper Ogwe aka Ptrc N'ihi The Medical Industry
CNC machining Uru N'ihi Liquid Pressure Kemeghi
CNC machining Uru N'ihi Liquid Pressure pistin
CNC machining Uru N'ihi Liquid Pressure Gbanye
CNC igwe Machine Parts
CNC nkenke machining Parts
Communication modul nkenke Metal akụrụngwa OEM Service
Kpọtụrụ Tachometer Metal oghere CNC machining Service
Kọmputa Signal Preamplifier casing CNC machining Ma bead ọgbụgba ọkụ & Anodize mgbere
Eriri Optic Agba mmetụta Aluminium Housing machining
Hardware Parts CNC machining Service
High mezuwo CNC machining Metal iberibe
Potentiometer nkenke Part
Nkenke CNC machined oghere Isi N'ihi valvụ njikwa
Nkenke CNC machined Parts N'ihi torque Meter
Nkenke CNC machining
Nkenke CNC machining Center
Nkenke CNC machining Parts
Nkenke lathe machined Position Pin
Nkenke Machine Parts CNC machining
Nkenke Metal akụrụngwa OEM Of Inductive Idi nso ihe mmetụta
Nkenke modul Omenala CNC machining Ijere N'ihi ọma jijiji mmesho Equipment
Nkenke Nonstandard Part N'ihi Digital Platform n'ọtụtụ
Premium CNC machining Factory Of ndụdụ Light Barrier
Akụkụ anọ iche mmetụta casing CNC machining
Ultrasonic Anemometer Metal akụrụngwa CNC machining Service